U-Spam Wokudlulisa Okuchazwe Ngumhloli We-Semalt Futhi Ungayivimba Kanjani Nemithetho Ye-.htaccess
Uma ungumthuthukisi wewebhusayithi noma isofthiwe yesofthiwe futhi unakekelwa ngemininingwane yezibalo ze-website / i-analytics, cishe uyazi nge-Google Analytics, Open Web Analytics, i-Piwik Analytics kanye namanye amawebhusayithi wokuqoqa idatha nokuhlaziywa kwedatha. Uma uqaphela ukuthi ezinye izimoto eziyinqaba nezivakashi ezingaqondakali ziphuma kumasayithi wokudlulisa amehlo njenge-buttons-for-websites.com, darodar.com, kanye ne- seo -solution.com, kufanele uqaphele ukuthuthukisa izinga lomgwaqo wakho.
U-Artem Abgarian, iMenenja Ephumelelayo Yempumelelo Yekhasimende Semalt , uchaza lapha ezinye izinto ezisebenzayo mayelana nalokhu.
Ukudluliswa kogaxekile okuchaziwe
I-Best-seo-solution.com, i-100dollars-seo.com, ne-darodar.com zingamawebhusayithi okudluliselwa kogaxekile. Bonke bavakashela imikhiqizo kanye nezinsizakalo zabo ku-intanethi, futhi into ecasulayo kakhulu ayinikela ngezinsizakalo zabo eshibhile. Noma kunjalo, izinsizakalo zabo azithembeki, futhi lawa mawebhusayithi ahlose ukukuthumela ithrafikhi emanga ngezinga le-100% lokuncipha. Njengoba ubona, zonke zazo zibalwa ekhasini lokuqala izinjini zokusesha. Lokhu kungenxa yokuthi la masayithi akhohlisa i-akhawunti yakho ye-Google Analytics.
1. I-100% ye-Bounce Rate - ivame ukuvakashela amakhasi akho bese ushiya isikhathi. Yingakho izinga lakho lokunciphisa isayithi lakho lingu-100% njengoba izivakashi zingakaze zithande okuqukethwe kwakho, isithombe sakho sesayithi, nezinsizakalo zayo..
2. Ukusetshenziswa ngokweqile kwezizinda eziphansi - lawa mawebhusayithi asebenzisa inombolo enkulu yezizinda eziphansi ukuze akhohlise kokubili i-Google Analytics namakhasimende abo. Bahlanganyele emisebenzini yokugaxekile futhi bahlukumeza amaklayenti ngokuchitha izindawo zabo ngokuhamba kwezimoto.
Hlaziya imithombo ye-Traffic kusuka ku-URL yokudluliselwa kogaxekile
Kungenzeka akunakwenzeka ukuthi sonke sihlaziye umthombo wethrafikhi kanye nama-URL we-spam wokudlulisa. Indlela engcono kakhulu, noma kunjalo, ngokudala ama-Filters ambalwa ku-Isigaba Esisha se-Engeza. Akukho mithetho nemigomo eqinile okufanele ulandele njengoba amakheli e-IP abakwa-spammers okudluliselwayo aqhubeka ekushintsheni cishe nsuku zonke. Kubonakala sengathi abagaxekile batshale imali nemali eminingi kuleli bhizinisi ukuthelela amawebhusayithi amaningi ngangokunokwenzeka.
Vimbela ukudluliselwa kogaxekile nge - Apache .I-Racaccess Rule
Uma usevava ye-Apache, ungalandela imithetho ye-.htaccesss yokuma ugaxekile ekuboneni phezulu kuma-log. Ngesikhathi esifanayo, akufanele ukhohlwe ukuthi bashintsha izixhumanisi ezibhekisela ngemuva kwezinyanga ezimbili kuya kwezintathu. Imithetho iphinde ibuyekezwe ngezikhathi ezithile, ngakho kufanele ulandele izibuyekezo ukuze ube nomqondo wemithetho yamanje ye-.htaccess.
Ngokungafani ne-darodar.com, amavidiyo-for-our-business.com anikezela ngamasevisi okukhiqiza amavidiyo kumakhasimende ayo omhlaba wonke. Kunamathuba wokuthi isevisi esemthethweni, kodwa ngenxa yomlando wabo ongaqondakali, akufanele usongele iwebhusayithi yakho nganoma yikuphi ukukhokhela.
Dala izihlungi zogaxekile zokubukwa
Uma ungafuni ukusebenzisa imithetho ye-.htaccess ngenxa yamakhodi abo adidekayo, ungakha izihlungi zogaxekile zokudluliselwa kokubuka. Lezi zihlungi zizokusiza ukuhlunga ugaxekile wokudluliselwa ngendlela engcono. Kufanele uhambe kusigaba sokubuka bese uhlola okukhethwa kukho okuhlunga. Lapha kufanele ufake ikhodi ethile futhi ungadluli ubude bayo ngaphezu kwezinhlamvu ezingu-255.
Hlanganisa ama-Hits kusuka ku-Spiders nama-Bots
Enye yamathuluzi anamangalisa kakhulu okusisiza ukuba silwe nogaxekile we-referrer ngaphakathi kwe-akhawunti ye-Google Analytics. Kufanele usebenze inketho yokuhlunga iBot, ezokusiza ukuthi ungabandakanyi amahlumela azo zonke izicabucabu ezaziwayo ezivela esigabeni sokubuka.